Fialan-tsasatra lehibe :: Mangina ny eny amin’ny tobim-piantsonana taksiborosy • AoRaha
Fialan-tsasatra lehibe Mangina ny eny amin’ny tobim-piantsonana taksiborosy
Ao anatin’ny vanim-potoanan’ny fialan-tsasatra lehibe ny ankamaroan’ny mpianatra, amin’izao fotoana izao, ankoatra ireo mbola hiatrika fanadinam-panjakana BEPC sy Bakalorea. Mangina tsy toy ny isan-taona ny eny amin’ireo tobim-piantsonana. Tsy rototra ny handeha hiala sasatra hivoaka an’Antananarivo ny ankamaroan’ny fianakaviana.
« Tena mbola tsy misy mihitsy ireo mpiala sasatra. Ireo mpanao varo-mandeha sy ireo manana raharaha maika vonjena ihany no mandeha any amin’ny faritra. Tsy misy afa-tsy fiara roa isan’andro sisa no miainga eto aminay, amin’izao fotoana izao », hoy ny tompon’andraikitry ny kaoperativa iray etsy amin’ny toby fiantsonana Ambodivona.
Voatery nampidina ny saran-dalana izy ireo noho ny fahavitsian’ireo mpandeha. Raha 23 000 ariary ny saran-dalana mihazo an’i Toamasina, ohatra, dia tafidina hatrany amin’ny 17 000 hatramin’ny 18 000 ariary izany ankehitriny.
Ny fahatongavan’ny mpino katolika avy any amin’ny faritra hiatrika ny lamesa lehibe hiarahana amin’ny Papa Fransoa eto Antananarivo sisa no mba handrandrain’ireo mpitatitra amin’ireo zotra rezionaly sy nasionaly ireo.
Fanjifana andavanandro :: Manararaotra mampiakatra vidin’entana ireo mpivarotra
Fomba nentim-paharazana :: Voasakan’ny lalàna amin’ny famoahana fanafody ireo mpitsabo